စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ, Forge ရဲ့အပိုင်း, ပျောက်ဆုံးသွားသောဖယောင်းရုပ် Casting, သဲကာစ် - Ke မင်
အကြောင်း Ke မင်
ကာဗွန်သံမဏိနှင့်အနိမ့်အလွိုင်းသံမဏိအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖယောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Cast နှင့်ချောထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Ningbo Yinzhou Ke မင်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ltd.specializing, တရုတ်ရေဖန်ခွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Cast တစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနာမည်ကျော်စက်မှုမြို့တရုတ်နိုင်ငံတွင် Yinzhou, Ningbo တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အကျိုးရှိပထဝီအနေအထားနှင့်အတူရောက်ရှိခံရဖို့အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 2002 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့် 5000 စတုရန်းမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းဧရိယာဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ယခု 50 employees.We ခေတ်သစ်စက်ရုံနှင့်အဆင့်မြင့် CNC စက်ကိရိယာများရှိထက်ပိုရှိပါတယ်။
ရေမှုံရေမွှား Paint နှင့်အတူ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Channel ကိုများအတွက်သံဆန်ခါ
High Quality သံ Foundry သို့ကာစ် & သံ ... သို့ကာစ်
Ht250 OEM ဝန်ဆောင်မှုဆောက်လုပ်ရေးစက်
OEM စိတ်တိုင်းကျ Precision မော်တော်ကား / Truck ကားမော်တော်ယာဉ်
ဦး Casting စိတ်ကြိုက်သံမဏိ / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ...
ဒါဟာ 10000 ကျော်တန်ချိန်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူတိ Cast နှင့်ချောထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ထားတဲ့2အဓိကအဆောက်အဦ, သံမဏိ ချ. foundry နှင့် CNC စက်စက်ရုံနှစ်ခုလုံးပါဝင်သည်, နှင့်ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပ, အမေရိက, ဂျပန်နှင့်အခြားသောတင်ပို့နေကြသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် Destinations ။
Xichemen, Jia ကျေးရွာ, Yunlong မြို့, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, Zhejiang, တရုတ် 315135
FROM မှအီးယူ flat PRODUCT မှသံမဏိ, PRICE ROUNDUP ...